धरान/ हातमा रङ र ब्रस बोकेका धराने कलाकार शनिबार बिहान भेला हुन्छन् अनि सल्लाह गरेर गन्तव्यतर्पm लाग्छन् ।
भेला भएपछि कहाँ जान्छन् उनीहरू ? के गर्छन् ? यसको जवाफ खोज्दा प्रेरणादायी छ । अगुवा कलाकार महेन्द्र राई भन्छन्, ‘धरान र आसपासको सुन्दर ठाउँमा जान्छौं, र त्यहाँको सौन्दर्यलाई क्यानभासमा उतारेर उजागार गर्छांै । यसले फाइन आर्टका विद्यार्थीलाई, नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूलाई सिक्ने मौका पनि मिल्छ ।’ उनले भनेजस्तै अग्रज र नयाँ पुस्ताका कलाकारहरू डाँडा पाखा, खोला प्रकृतिको काखमा पुग्छन् । अनि, त्यहाँको सौन्दर्यलाई जस्ताको तस्तै ल्याण्डस्केप क्यानभासमा उतार्छन् ।
प्राकृतिको अध्ययन गर्दै सुन्दरतालाई धराने कलाकारहरूले क्यानभासमा उतार्न थालेको लगभग ५ महिना बितिसकेको छ । धरानेहरूलाई नै थाहा नभएको ठाउँमा पनि पुगेर कलाकारहरूले ती ठाउँलाई क्यानभासमा उतारेका छन् । यसले कलाको माध्यमबाट पर्यटनको प्रवद्र्धन पनि भएको कलाकारहरूको मान्यता छ । कलाकार जीवन पौडेल भन्छन्, ‘हामीले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नै क्यानभासमा उतार्ने हो, यसले पर्यटनको पनि प्रर्वद्धन हुन्छ, त्यो ठाउँको प्रचार पनि हुन्छ ।’
कलाकारहरू यसरी हिँड्दा निरन्तर अभ्यास हुन्छ । नयाँ पुस्ताले अग्रजहरूको काम गर्ने शैली सिक्ने अवसर पाउँछन् । कलाकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन्छ । ‘आधारभूत ज्ञान कक्षाबाट पाउने हो, बाँकी सबै ज्ञान त हामीले नेचरबाटै सिक्नुपर्छ । यसरी डुल्दै ल्याण्डस्केप बनाउँदा हाम्रो ज्ञान नै फराकिलो हुन्छ, त्यसैले यो अभियान थालेका हौं । कोठामा भन्दा प्रकृतिको काखमा बसेर पेन्टिङ गर्दा धेरै कलर खेलाउन सकिन्छ,’ अगुवा कलाकार राई भन्छन् । प्रत्येक शनिबार धरानका प्रनोद दत्त, महेन्द्र राई, खेल थापा, विक्रम बनेम, जीवन पौडेल, युमेनहाङ राई, धीरज राई, हेमन्त थापा, विज्ञान राई, देवलकुमार राईलगायत प्राकृतिक सौन्दर्य खोज्दै डुल्ने गरेका छन् ।
धराने कलाकारहरूको कला अभियानबाट झापाली कलाकारहरू पनि प्रभावित भएका छन् । असार १५ गते रोपाइँ महोत्सवमा आएका कलाकार विष्णुकुमार थापा र युवराज रिजाल यो शनिबार धरानको फुस्रेस्थित सर्दु खोला किनारमा धराने कलाकारहरूसँगै सामेल भए । उनीहरूले पनि त्यहाँको प्राकृतिक सौदन्र्यलाई क्यानभासमा उतारे । ‘धराने कलाकारहरूको अभियान देखेर साह्रो खुशी लाग्यो, नयाँ पुस्ताले सिक्ने अवसर पाउँछन् । हामीले सिक्ने प्रकृतिबाटै हो,’ गौरदहका कलाकार थापाले भने ।